Tartanka Tatuoska ah - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
1. darafta fikradda naqshadeynta ee wiilasha
Muhiim maaha haddii aad tahay qof dumar ah ama lab ah marka ay timaado in la soo galo. Tani waa sababta aan u aragno dad badan oo isticmaala tattoo is-dhaafsiga. Tattoo iskutallaabtu waxay leedahay muhiima qoto dheer iyo macne leh taasina waxay ka dhigeysaa in iskutallaabtu ay noqoto mid caan ah.
2. Iskutallaabta garabka tattoo naqshadeynta fikradda ragga ee garabka
Tattoo isweydaarsi sida tan waxay noqon kartaa mid run ah haddii aad si fiican u shaqeysay gurigaaga. Waqtigaan la soo dhaafay, xayawaanka tattoo ee loo yaqaan 'tattoo' ayaa noqday mid caan ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo xayawaan ah oo xayawaan ah oo aan ku aragno qaybaha jidhka dadka.
3. Fikradda naqshadeynta jimicsiga ee loogu talagalay ragga
Mar dambe lama yaabin si aad u aragto tattoo iskutallaabta ah sida quruxda sida tan. Sanado badan, farshaxanada ayaa wax ka beddelay xirfadahooda waxaana ay ka badanyihiin hal sawir oo lagu sawirayo naqshadaha sawirada.
4. Fikradda sawir-qaadista sawir-dhaafka ah ee rikoodhada
Waa inaad fahamtaa in tattoo iskutallaabta uu noqdo mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee dunida ku yaal.
5. Small naqshadeeynta tattoo ee gabdhaha dhabarka
Onlineka wuxuu leeyahay farshaxan farabadan oo badan oo ah xayeysiis ah oo aad dooran karto. Waxay qaadan kartaa daqiiqado ama saacado
6. Gacan ku calaamadee fekerka saxda ah ee jilbaha
Markaad diyaar u tahay tattoo finger sidan oo kale, waxaa ugu fiican inaad weydiiso su'aalo ka hor intaanad qorin
7. Naqshadeeynta jimicsiga isweydaarsiga ragga
Ma jirto qayb ka mid ah adduunka oo aanad arki karin dadka leh tattoos iskutallaabta. Sawirada shookaanta ayaa noqotey mid xiran oo ah taajir iyo miskiinba labadaba.
8. Iskutallaab fudud tattoo ee gabdhaha dhabarka
Racfaanka shakhsiga ah ee tattoo dhaafa ayaa ku xiran qofka loo garto marka la arko. Waxaan aragnay dadku inay la yimaadaan naqshado adag oo tafaasiil ah sida tan.
9. Kijirada badhka qodxid iyo xargo isku dhejis ah oo loogu talagalay wiilasha
Naqshadda aad hesho marka aad ka mid tahay kumanaan shaashado iskudhaf ah ayaa naqshadaya wax jira oo kaa dhigaya inaad istaagto. Waxaan ognahay in magacyadayadu ay yihiin kuwo macno leh si ay sidoo kale u dheehan yihiin iyo macnahooda.
10. Iskuday iskutallaabta fikrada naqshadeynta naqshadda ragga
Fikradda ah inaan ka helno tattoo iskutallaabta waa shay aan caddayn karin.
11. Iskuday iyo iskuduubka naqshadeynta tattoo gacmaha loogu talagalay guys
Goobta ugu horreysa ee aad ku bilowdo in lagu dhejiyo tattoo farta haddii aad sameyneyso markii ugu horeysay waa inaad ku bilowdo qayb yar.
12. Koodhka shaashadda oo dhan iyo rikoodhka tattoo ee ragga
Tijaabadu waxay ku adag tahay in la iska saaro mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in ay baxdo haddii aan la sameynin daryeel. Dad badan oo ku tijaabinaya tattoo finger ka badan ayaa isticmaala khadadka ku-meel-gaadhka ah.
tattoo ah octopustattoos qorraxdatattoos iskutallaabtatattoo dheemanku dhaji tattoosTartoo ubax badantattoos ubaxtattoo maroodigacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahTattoos Wadnahawaxay jecel yihiin tattoosgadaal u laabokoi kalluunkaTilmaamta jaalaha ahtattoos cagtatattoos qabaa'ilkaTattoo Feathersawirada malaa'igtamuusikada muusikadahenna tattoogaraacista gacmahatattoo biyo ahsawirada gabdhahatattoos moonsawirrada raggatattoo indhahalammaanahatattoos sleevetattoos eagleTattoo infinitytattoos gacantatattoos saaxiib saxa ahtattoo tilmaanDhaqdhaqaaqatattoos qosol lehlibto libaaxshaatiinka shiidantattoos qoortashimbir shimbirfikradaha tattooJoomatari Tattoostaraagada kubbaddatattoos taajkiitattooswaxaa la dhajiyay tattoossawir gacmeedlaabto laabtaarrow Tattoonaqshadeynta mehndijimicsiga bisadaha